Yini i-cryptocurrency ongayithenga ukuqala ukudala iphothifoliyo yethu yezimpahla ze-crypto | Izindaba zamagajethi
Izindaba zamagajethi | | Criptomonedas
Yize kungadingeki uhlale njalo njengentuthwane eyisaga endabeni, akukhona ukuhlakanipha ukwenza kuphela njenge-cicada, ngakho-ke wakhe inani eligodliwe, noma ngabe lithobeke kangakanani, akulimazi neze. Uma futhi sizizwa sinenhlanhla, singakhetha ifa lezezimali, Izimali zedijithali, ukuthi ngokuba mncane asikwazi ukwazi ukuthi kuyaphi, kungahle kukhuphuke njengogwebu, kucwile kabi noma kufinyelele ukuzinza okufana nalokho okutholwa yimali ye-fiat njengamanje (okungenani izimali ezibaluleke kakhulu emhlabeni).
Uma sizogxila kokubaluleke kakhulu, kungaba yizimali ezinhlanu; iBitcoin eyaziwayo, abanye abantu thenga i-Ethereum, noma enye i-Bitcoin Cash, i-XRP noma i-Tether. Laba abahlanu bangabokuqala ebangeni lokwenza imali, uma sikhetha ukugxila kunani ngakunye lemali ye-idijithali yemali izinga lizohluka kakhulu, yebo, okungalokothi kushintshe isikhundla sokuhlonishwa, okuhlala kuhlala yiBitcoin.
1 I 5 ebaluleke kakhulu
I 5 ebaluleke kakhulu
I-Bitcoin (i-BTC) yaba ngeyokuqala, iyona leyo unenani eliphakeme ngohlamvu lwemali ngalunye, kuma-dollar ayi-8.165 nge-idijithali yemali ngayinye bekungu-Okthoba 9, 2019. Ngaphezu kwalokho, yize ilahlekelwa umhlaba njengoba abadlali abasha bejoyina lo mdlalo, igxila enanini elikhulu kunawo wonke emali edidiyelwe, cishe ama-dollar ayizigidi ezingama-147, ukuthola umbono we ukuphelelwa yisikhathi kwe-BTC nakulesi sici. Okulandelayo ngezinga likasonhlamvukazi, u-Ethereum, uqoqa isamba semali esingaphansi kwamadola ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-000, okuthe ngakolunye uhlangothi, kufanele kuthiwe akukubi nakancane.
Njengephuzu lokugcina elihle, uma ungumuntu okhululekile, inani eliphakeme le-BTC yizigidi ezingama-21, njengamanje phakathi kwezigidi eziyi-17 nezingu-18 zazo esembiwe, futhi ngeke kusaba nelilodwa, ngakho-ke, uzobe ukhululekile esihlahleni kwe ukwehla kwamandla emali futhi kugcizelela umlingiswa wayo wenani eligcinwayo.
La okwesibili embangweni ukuhweba, osekuzophela isithathu sokuqala sika-Okthoba, cishe ama-dollar ayi-176 nge-Ethereum (ETH), akuyona eyeyona ebaluleke kunazo zonke (ngo-Okthoba 2019 kuseyiMenzi, cishe ngamaRandi angu-460 ngohlamvu lwemali ngalunye), kodwa okubaluleke kakhulu, ngubani ongafuni ukuba ne-ETH embalwa esikhwameni sabo se-crypto? Yize cishe wonke ama-cryptocurrensets angathengwa ngokuhlukaniswa ngokwawo, okungukuthi, ungathenga izingxenyana zazo, akudingekile ukuthi uzithenge ngokuphelele, i-ETH isivumela ukuthi sithole yonke impahla ngaphandle kokukhokha imali eyihaba.
Ngenani elijwayele ukuhamba kusukela ekupheleni kukaJuni walo nyaka cishe ngekota yedola, i- I-Ripple cryptocurrency inonhlamvukazi of $ 12 billion.
La Imfoloko ye-BTC igcina udumo olukhulu lwemali yabazali bayo, hhayi ukuhweba ngalutho ngemali eyi- $ 231 ngohlamvu lwemali ngalunye, kucatshangelwa ukuthi iqale ukuhweba ngonyaka ngo- $ 113 kungasekho.
Tether, kabani inani lokuhweba lamanje cishe lingu- $ 1, iboshelwe ngandlela thile futhi ixhaswe yimali ye-fiat, okuyivikelayo ekushintshashintsheni kwamanye ama-cryptocurrensets, kokubili ekushayweni nasekuphikisweni okubukhali, okungenzeka kungayenzi imali eyi-cryptocurrency ekahle uma ufuna ukucabanga.
Asazi ukuthi kuzokwenzekani ngokuzayo, kepha okubonakala kuqinisekile ukuthi okungenani esikhathini esifushane i-cryptocurrensets izoba nathi futhi iqhubeke nokuphakamisa izinkanuko nenzondo ngokufanayo. Uma singaqhamuki eqenjini lesibili, kufanele ukuthi okungenani sibabheke njengotshalomali bese silandela izindaba ezihlobene nabo.
Uma beqeda i-2018 ngaphezu kwezintengo abaningi babo ababenazo ngesikhathi sokuzalwa, kepha ngaphansi kakhulu amanani afinyelele ekupheleni kuka-2017Iqiniso lokuthi ekupheleni kukaJuni i-BTC cishe laliphindaphinde inani layo kusuka ezinyangeni eziyi-6 ezedlule akumele linganakwa, futhi ngezinga elincane okufanayo kungashiwo cishe ngawo wonke ama-cryptocurrensets amakhulu.
Vele lokhu akusho ukuthi bazophinde bavuke, emhlabeni wezezimali akukho okuqinisekile, kepha lokho okubonakala kukukhombisa ukuthi, ngokuphambene nalokho abakucabangayo abakucabangayo, ama-cryptocurrensets asenayo intambo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ubuchwepheshe » Criptomonedas » Yini i-cryptocurrency ongayithenga ukuqala ukudala iphothifoliyo yethu yezimpahla ze-crypto
Ungayivimba kanjani i-INE ekubhaliseni indawo yakho
Ama-movie amahle kakhulu wokubuka le Halloween ku-Netflix naku-HBO